Bedwetting in childhood in Somali | Continence Foundation of Australia
Bedwetting in childhood in Somali
Waa maxay sariir-qoyntu?
Sariir-qoyntu (oo sidoo kale loogu yeero nocturnal enuresis) waa marka kaadiheystu ay faaruqdo iyadoo ilmuhu hurdo. Tani waxay dhici kartaa badanaa, ama habeen kasta.
Sariir-qoynta waa wax caam ah. Qiyaasstii hal shantii carruur ah Australiya ayaa qooya sariirtooda. Sariir qoynta waxay ka jiri kartaa qoysaska dhexdooda waxayna caam ku tahay wiilasha marka loo eego gabdhaha inta ka horeysa da’da sagaalka sanno. Waxay ku noqon kartaa wax ka xanaajiya ilmaha oo welwel ku abuura qoyska oo dhan. Warka fiicani waa waxaad heli kartaa caawimaad.
Maxaa sababa sariir-qoynta?
In aanay awoodin inay si buuxda uga toosaan hurdada.
Carruurta sariirta qooyaa ma aha kuwo caajislowyaal ah ama edebdaran. Jirooyinka qaarkood ayaa xiriir la leh sariir qoynta, laakiinse carruurta badidooda sariirta qooyaa ma qabaan dhib weyn oo caafimaad.
Kontoroolka kaadiheysta ee wakhtiga maalintii ayaa ka horeeya qaleylka wakhtiga habeenkii. Carruurta badidooda waa qalalan yihiin habeenkii oo dhan laga bilaabo da’da saddexda sanno iyo habeenkii laga bilaabo da’da dugsiga. Si kastaba ha ahaatee, tani way isbedbedeli kartaa carruurtana waxaa laga yaabaa inay ku dhacaan shilal badanaa, labada maalintii iyo habeenkii, ilaa ay gaadhaan toddoba ama sided sanno.
Goormaad raadsaneysaa caawimaad ku saabsan sariir qoynta?
Waxaa ugu wanaagsan inaad ka raadiso aqoonyahan caafimaad oo leh tababar khaas ah dhibaatooyinka kaadiheysta carruurta, sida dhakhtar, fiisiyoterabi ama kalkaalisada kala talinta ceshadka kaadida iyo saxarada. Waxay ka caawin karaan carruurta sariir qoynta laga bilaabo marka ilmuhu uu jiro qiyaastii lix sanno. Wixii ka horeeya wakhtigan marmarka qaarkood waxay noqon kartaa wax adag inay ilmaha u noqoto wax caawimaad badan. Si kastaba ha ahaatee, xaaladaha qaarkood waxaa waxbarasho fiican ah inaad caawimaada raadsato sida ugu dhakhsaha badan sida marka:
ilmihii qalalnaa wuxuu si lama filaan ah u bilaabaa inuu habeenkii isqooyo;
isqoyntu waxay badataa da’da dugsiga ka dib;
isqoyntu way dhibtaa ilmaha ama waxay ka dhigtaa mid xanaagsan ama murugeysan; ama
Ilmuhu wuxuu rabaa inuu qalalnaado.
Kontoroolka kaadiheystu ma noqon karaa dhib maalintii?
Carruurta qaarkood ee habeenkii sariirta qooya sidoo kale waxay leeyihiin dhibaatooyinka ah siday u shaqeyso kaadiheystoodu maalintii. Waxaa laga yaabaa inay musqusha aadaan wakhti yar ama marar badan, waxay u baahdaan inay musqusha ku carraraan iyagoo degdegsan, waxaa dhib kala kulantaa faaruqinta dhammaan kaddiheysta ama qabitaanka dhibaatada caloosha. Inuu ilmuhu leeyahay nigis qoyan mooyee, qoysasku badanaa ma oga waxyaalaha ku saabsan dhibaatooyinkan kale ee kontoroolka caloosha iyo kaadiheysta. Maalin isqoynta cusub ee ilmaha musqusha yaqaan sida loo galo waa in lagala hadlaa dhakhtar.
Maxaa laga qaban karaa sariir-qoynta?
Carruurta badidooda waxay joojiyaan isqoynta iskood iyagoon wax caawimaad ah helin. Badanaa, haddii isqoyntu ay weli tahay badanaa wax dhaca ka dib da’da sideed sanno ama sagaal, dhibaatadu iskood uma xalismeyso. Waxaa jira siyaalo badan oo loo daaweeyo sariir qoynta. Aqoonyahan caafimaad ayaa bilaabi doona inuu jeegareeyo ilmaha si uu u hubiyo inaysan ahayn wax jir ahaan ah oo sababaya iyagoo ogaanaya siday u shaqeyso kaadiheystoodu maalintii. Kadibna waxaa jira dhawr siyaalood oo loo daaweeyo sariir-qoynta oo badanaa la isticmaalo:
Alaarmiga habeenkiiee yeedha marka ilmuhu qooyo sariirta. Tani waxay ka shaqeysaa inay barto ilmaha u toosida dareenka kaadiheysta buuxda. Alaarmiga waxaa la dhigaa sariirta ama nigiska ilmaha. Natiijada way ugu fiican yihiin marka ilmuhu uu doonayo inuu qalalnaado, ee uu in badan isqooyo, uu caawimaad ka helayo waalid habeenkii oo uu isticmaalo alaarmiga habeen kasta dhawr bilood. Carruurta qaarkood waxay noqdaan kuwo qalalan markay isticmaalaan alaarmiga laakiinse dib ayey ka bilaabaan inay mar labaad isqooyaan. Alaarmigu mar labaad ayuu shaqeyn karaa soo noqoshadaan kadib.
Daawooyinbuufiyo oo bedelaya siday u firfircoon tahay kaadiheystu ama yareynaya inta kaadi ah ee ay sameyso habeenkii ayaa dhakhtar kuu qori karaa. Daawooyinkan waxaa loo isticmaali karaa si ay kaadiheystu ugu shaqeyso si ka fiican habeenkii. Daawooyinka oo kaliya badanaa ma daaweeyaan sariir-qoynta. Shaqada kaadiheysta waa in la hagaajiyaa ama sariir qoynta waxaa laga yaabaa inay soo noqoto marka daawada la joojiyo.
Maxay sameyn karaan waalidiintu?
Ka doono caawimaad aqoon yahan caafimaad oo u leh tababar khaas ah dhibaatooyinka kaadiheysta carruurta, sida dhakhtarka, fiisiyoteri yaqaan ama kalkaalisada lataliyaha ceshadka kaadida iyo saxarada.
Kala hadal ilmahaaga sida jirkiisu u shaqeeyo.
Eeg calloosha oo ku fadhiisata maadaama ay tani ka dhigi karto inay dhibka kaadiheystu sii xumaato. Raadso caawimaad caafimaad haddii ay tahay dhib sii soconaya.
Haddii ilmahaagu uu isticmaalayo alaarmiga sariir-qoynta, toos markay qayliso kana caawi inay toosaan oo ay bedelaan dharkooda ama go’a. Waa inaad hubisaa inuu jiro iftiin ku filan habeenkii si ay ugu sahlanaato inay musqusha tagaan.
Waxaa jira waxyaalo aan caawiney NIN:
HA U ciqaabin sariir-qoynta.
HA KU ceebayn ilmaha saaxiibadiis ama qoyska hortiisa.
HA U qaadin ilmaha musqusha habeenkii si ay u soo kaajaan. Tan waxaa laga yaabaa inay yareyso qaar ka mid ah sariir qoynta, laakiinse kama caawineyso inuu ilmuhu barto sidii uu u qalalnaan lahaa.
HA iskudeyin inaad xaliso sariir qoynta marka xubnaha kale ee qoysku ay ku jiraan wakhti welwel iyo caddaadis leh.